Iifilitha zangaphandle ze-aquarium: eyona ilungileyo kunye nendlela yokukhetha eyakho | Ngeentlanzi
Unokuba ne-aquarium kwaye ufuna ukuyigcina icocekile kwaye isempilweni kangangoko ukuze iintlanzi zakho zihlale kwindawo ezifanelekileyo. Kule nto, ifuna izinto ezithile kunye nezixhobo ezisebenza ukuphucula ulondolozo lwayo. Phakathi kwezo zinto sifumana isixhobo sokuhambisa iintlanzi kunye neeoksijini zamanzi. Namhlanje siza kuthetha Iifilitha zangaphandle zamanzi.
Ngaba uyafuna ukwazi ukuba loluphi olona luhlu lungcono lweefilitha zasemanzini kunye nento ekufuneka uyithathele ingqalelo xa ukhetha? Ewe, qhubeka ufunda, kuba le yiposti yakho 🙂
1 Iifilitha zangaphandle ezilungileyo ze-aquariums
1.1 Icebo lokucoca ulwelo lwangaphandle lwe-aquarium emhlophe naluhlaza okwesibhakabhaka
1.2 Umbala wokucoca umbala omnyama nobomvu
1.3 Isihluzi sobungcali
1.4 Icebo lokucoca ulwelo lwangaphandle
1.5 Icebo lokucoca ulwelo lwangaphandle lwee-aquariums ezineziponji ezi-3
1.6 Icebo lokucoca ubhaka langaphandle
1.7 Hluza ngeemoto ezingama-55W
2 Yintoni omele uyiqwalasele xa ukhetha isihluzo sangaphandle se-aquariums
3 Iimpawu eziphambili
4 Uyifaka njani ifayile ye-aquarium yangaphandle
5 Kukangaphi kufuneka uyicoce?
6 Ucoceka njani isihluzo se-aquarium yangaphandle
Iifilitha zangaphandle ezilungileyo ze-aquariums
Lokucoca ulwelo A440 107 ...
Icebo lokucoca ulwelo lwangaphandle lwe-aquarium emhlophe naluhlaza okwesibhakabhaka
Olu hlobo lwecebo lokucoca ulungile kwaye ubhetyebhetye. Unokucoca amanzi kwi-aquariums ezinomthamo ukuya kwi-400 yeelitha. Isetyenziselwa ukucoca amanzi kuzo zombini ii-aquariums zamanzi amatsha kunye netyuwa. Indibano ilula kwaye ibandakanya iindawo ezintathu ezahlukeneyo. Yintoni egqithisile, Icebo lokucoca ulwelo lisebenza ngokwamanqanaba. Oko kukuthi, akusoloko kusebenza ngamandla afanayo. Kulungile xa kuziwa ekugcineni amandla kuba, xa kungafuneki njalo ukucoca amanzi, akufuneki ukuba usebenze ngokupheleleyo.
Sisisihluzo, unako Thenga apha.
Umbala wokucoca umbala omnyama nobomvu
IHydor 104I-HY / C01103 ...
Esi sihluzi sinezinto ezintle ezintle ezigqityiweyo ngombala obomvu nomnyama. Elona candelo likhulu kweli cebo libala. Itekhnoloji yayo iqinisekisa ngokhuseleko olungcono ukunqanda naluphi na uhlobo lokugcwala kwe-aquarium.
Isiseko sokucoca amanzi senziwe ngerabha kwaye sithe cwaka. Icoca amanzi kakuhle kwaye iwashiye ecocekile.
Olu hlobo lwecebo lokucoca ulusu luhleli emaphethelweni e-aquarium kwaye emile njengobhaka wobhaka. Olukhetho olufanelekileyo kwezi aquariums zaphakathi-encinci. Inempompo ethe cwaka ethatha amanzi kwi-aquarium kwaye Emva koko ithunyelwa etankini apho ihluzwa khona kwaye icocwe ukuze ibuyiselwe kwakhona. Itekhnoloji yokuhluza efanelekileyo iya kunceda ukugcina amanzi akho ecocekile ixesha elide.
Ixabiso layo lifikeleleka kakhulu, yithenge.
Isiqu sakho - Impompo yangaphandle ...
Esi sihluzo sinoyilo olusebenzayo. Kwaye kufanelekile ukongeza njengomhombiso ngaphandle kokuthatha indawo. Ukuba awunayo i-aquarium enkulu, olu hlobo lwecebo lokucoca ulungile. Yenza ingxolo encinci kwaye ilungele zombini iintlanzi kunye neefudo zasemanzini ezihlala zingcola ngokusetyenziswa kwazo.
Icebo lokucoca ulwelo lwangaphandle lwee-aquariums ezineziponji ezi-3
I-Bio Chemical Bio De...
Sisicoci kwii-aquariums ezingekho ngaphezulu kwe-120 yeelitha zomthamo. Ukusebenza kwayo kusebenza ngokukuko kwaye ikuvumela ukuba ulawule ukungena kwamanzi kunye neveluve ngevalve ye-multifunction. Ithe cwaka kwaye ilungele amanzi amatsha netyuwa.
Thenga esi sihluzo apha.
Icebo lokucoca ubhaka langaphandle
SunSun HBL-302 Isihluzo...
Olu hlobo lwecebo lokuhluza nalo linobume bhaka. Ilungile into yokuba uyakwazi ukuyibeka kwi-aquarium ngaphandle kokuthatha indawo eninzi. Yincinci ngobukhulu kodwa ukusebenza kwayo ngokuthelekiswa nezinye ezininzi ezinkulu. Ikuvumela ukuba ucofe amanzi ngendlela elula yokugcina iintlanzi kunye ne-algae zisempilweni ixesha elide.
Ifikeleleka ngexabiso lemali. Ungayibona apha
Hluza ngeemoto ezingama-55W
IWaldbeck Clearflow 55UV ...
Ezi zihluzo zinemoto engama-55W Umsebenzi wayo uhlonipha okusingqongileyo. Esi sihluzo siyimfuneko ukuba sifuna ukucoca amanzi kwiitanki ezinkulu ukuya kuthi ga kwiilitha ezingama-2000 zamanzi. Ikwanaso isicacisi se-9 W kunye nesihluzo sangaphambili esinceda ukususa ubumdaka obukhulu ukuze isihluzi esiphambili singonakalisi.
Aphaungabona ixabiso layo.
Yintoni omele uyiqwalasele xa ukhetha isihluzo sangaphandle se-aquariums
Njengoko besikhe sathetha ngamanye amanqaku, icebo lokucoca amanzi yinto ebaluleke kakhulu ukuze ube neemeko ezifanelekileyo zentlanzi yakho. Ukugcina amanzi ecocekile kunye neoksijini yeyona nto ibonisiweyo ukuba sifuna iintlanzi zethu zikhule kakuhle kwaye ziphile ixesha elide. Ukongeza, ngale ndlela akuyi kufuneka sitshintshe amanzi kwi-aquarium rhoqo.
Okwangoku, sifumana inani elikhulu lokucoca ulwelo lwangaphandle kuzo zonke iintlobo zentlanzi. Kulapho ke xa umsebenzi wokwazi kakuhle ukuba yeyiphi oyikhethayo iba nzima. Ukukhetha isihluzo esifanele iimfuno zethu, kufuneka siqwalasele imiba ethile.
Eyokuqala kukwazi ubungakanani be-aquarium Ukwazi ukuba leliphi inani lamanzi ekufuneka silicoca ukuze lihlale licocekile. Ukuzama ukucoca amanzi kwi-aquarium eneeelitha ezingama-50 akufani neelitha ezingama-300. Iifilitha zangaphandle ngokubanzi lolona khetho lufanelekileyo kwii-aquariums ezincinci. Ukuba sibeka amacebo okucoca ngaphakathi kwaye nesithuba seentlanzi sincitshisiwe, siya kuba sithintela inkululeko yabo yokuqubha. Ke ngoko, kubhetele ukubabeka ngaphandle ukuze babe nakho ukwenza uhlaselo lwabo ngokukuko.
Umba wesibini wokuqwalaselwa luhlahlo-lwabiwo mali. Njengoko kukho uluhlu oluninzi, kukho amaxabiso amaninzi. Kungcono ukuphonononga imisebenzi eyahlukeneyo enayo isihluzo ukuze sikwazi ukukhetha eyona ilungele iimeko zethu.
Eyona nto intle ukuyenza ukuthenga esona sihluzi silungileyo kwimeko yethu kukujonga kwakhona imisebenzi enayo. Esi sisixhobo esisisiseko esinceda ukugcina amanzi kangangoko kwaye nokuwagcina kude nobumdaka obenziwa njengoko ubomi bukhula kwi-aquarium. Ukungcola okunje ngokutya, ukutya kwentlanzi okanye amagqabi ezityalo. Onke la masuntswana athoba umgangatho wamanzi kwitanki leentlanzi kwaye afuna ukuhluzwa. Ngale ndlela siyakwandisa nexesha elithathayo ukutshintsha amanzi.
Qiniseka ukuba ukubekwa kwesihluzo sangaphandle kulula kwaye kuzinzile. Unxibelelwano olungaphandle ngethumbu kunye nezivalo zilungele ukuba amanzi ajikeleze ngaphandle kwamandla kwaye acoce ngokukhawuleza. Ukuhamba kokuhamba kwesihluzi kunamanzi amaninzi anokucoca iyunithi yexesha.
Impendulo ekuphela kwayo yokuhluza i-aquarium yangaphandle kukuba ivelisa ingxolo xa isetyenziswa. Bahlala benamaxabiso aphezulu, nangona bekhuphisana kakhulu. Ukuthintela oku kungahambi kakuhle, senze ukhetho lweefilter ezilungileyo apha.
Uyifaka njani ifayile ye-aquarium yangaphandle
Xa ufaka icebo lokucoca ulwelo lwangaphandle kuqhelekile ukuba namathandabuzo. Iindawo eziphambili zezi: icebo lokucoca ulwelo, iityhubhu zokucoca ulwelo lwaselwandle, izinto zokucoca ulwelo, ulwelo lwangaphandle lokucoca ulwelo kunye nemingxunya. Masibone indlela yokuhlanganisa inyathelo lokucoca ulwelo lwe-aquarium:
Into yokuqala kukukhwela ithumbu lokucoca ulwelo lwe-aquarium. Ukwenza oku, sidibanisa ibar ye-diffuser kunye ne-arc yokuphuma. Le bar ye-diffuser yeyona inoxanduva lokugalela amanzi wakuba ucociwe kwi-aquarium.
Sincamathisela i-artichoke kwi-aquarium sisebenzisa iikomityi zokutsala. Sidibanisa intloko yeshawa kunye nethumbu kwindawo engena amanzi kwifilitha.
Ezi mibhobho zihlala zingena kwimibhobho eyahlukeneyo phantsi koxinzelelo. Ukuba ufuna ukubenza babhetyebhetye ngakumbi, ungabafudumeza kancinci.
Ukunyusa izixhobo zokucoca ulwelo, kuya kufuneka ujonge kwicala lokuhamba kwamanzi ngaphakathi kwi-aquarium. Izinto zokucoca ulwelo zebhayoloji kufuneka zilayishwe ukuze iimeko eziyimfuneko zokusingqongileyo ziyilelwe iikholoni zebacteria yokuseka.
Nje ukuba izinto zokucoca ngomatshini zibekhona, sibeka izixhobo zokucoca ikhemikhali njengekhabhoni esebenzayo. Kuyathakazelisa ukujonga ukuba zonke izixhobo zokucoca ulusu zisebenza kakuhle kwaye zinxibelelana neendonga zokucoca ulwelo.
Kukangaphi kufuneka uyicoce?
Enye yezona zinto ziphambili la maziko anazo ngaphezulu kwezinye kukuba afuna ulondolozo oluncinci. Coca nje isihluzo sangaphandle rhoqo kwiinyanga ezi-3 okanye ezi-6 okanye xa ubona ukwehla kokuhamba. Ayifuni kucocwa rhoqo ukubala njengomsebenzi wolondolozo.
Ucoceka njani isihluzo se-aquarium yangaphandle
Xa ucoca isihluzo kukho amathandabuzo. Makhe sibone ukuba isihluzo sangaphandle kufuneka sicocwe njani. Ukuba ubeka enye yezixhobo zokucoca ulwelo, ayikhuthazwa into yokubuyisela ngaphezulu kwesinye ngexesha. Ukuba uyayenza ngale ndlela, ungaphulukana neekoloni zebacteria eziyimfuneko kumgangatho olungileyo wamanzi.
Ukucoca i-foamex kufuneka ihlale isenziwa ngamanzi e-aquarium. Injongo iyafana, ayizukuphulukana neekoloni zebhaktiriya. Akukho sidingo sokutshintsha ii-eartips njengoko zinako ukuhlala iminyaka. Bacoce nje ukuba besingcolisile. Kwanele ukubasusa ngamanzi e-aquarium.
Yintoni elula kukuqinisa rhoqo inani labantu beebhaktiriya. Ngalo lonke ixesha sicoca icebo lokucoca ulwelo, eyona nto ifanelekileyo kukufaka iibhaktheriya ezintsha kunye nezinye zeemveliso ezicetyiswayo ukulungiselela le njongo.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi ungafunda ngakumbi malunga neefilitha zangaphandle ze-aquarium kwaye ukhethe eyona uyithandayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » Iifilitha zangaphandle ze-aquarium